Maxay Tahay Wasaaradda Doqon Ma Waydo ( Abdi-Shotaly). | Salaan Media
Maxay Tahay Wasaaradda Doqon Ma Waydo ( Abdi-Shotaly).
Maah-maah Somaliyeed baa tidhaaha ” Nin iyo hadlkii isu eeg” Waxan la yaabay, ka loo dhiibtay wasaarad ku sheegta la magac baxday ” Wasaaradda doqon ma waydo”, laakiin askarta meesha ka baf-baf lihi, siddii gebgeb-laha ama oday geelii ba’ay bahalka la yidhaaho, ay ku sheegaan “Wasaaradda War-faafinta iyo wacyi gelinta” iyaba waa nasiib darro ku habsatay Ummadda reer Somalilande. Taas uu xunbada ka tuuro ka la yidhahao ” Af-dulaaq darayo”, baa waxay ku meeraysa-naysaa siddii ay ummadda af-ka uga xidhi lahayd, una cabudhin lahaayeen xoriyatul-qawlka, si aanay u kashifmin oo beenta iyo huu-haadda dadka lagu khaway-siinaayo loo ogaanin, iyadda oo uu ka hor joogaha ka ahi ” Waa Af-dulaaqe”, uu maalin kaste ku soo qor-qoro wax uu ku sheego sharci cusub oo uu soo saaray, kuna hanjabo maxakamad bana idiin dirayaa. Ula jeedadda uu ka leeyahay-na ay tahay, yaan la ogaan xumaanta, eexadda, kala sooca ummadda iyo dalka ay baabasa-deen, badhna ka faasaxeen puntland, kuwa boobka ku bahoobay iyo iska hor-keenidda shicibku, taas oo kolba wax aan jirin iyo colaad hor leh lagu jiheeyo. si ay had iyo jeer foodda iskula jiraan, oo ay ku dheeraystaan wakhtiga, cimiri dhererna ka dhigtaan si xun u ceesh-kaasi loo debed baxay.
Waxa uu “af-dulaaq”hadaba uu isku deyey, in uu xanibo mareeagaha qaar, oo ay yidhaahaan haddii aydin hebel soo daysaan maqaaladiisa waa la idinka xidhayaa, balse ma oga in aanay mareegina ka masuul ahayn, maqaaladda loo soo diro ee uu qofka qorey, ka mansuul yahay dul iyo hoos, sidda aniga oo ah ( abdi-shotaly). malaha dadka waxay moodayaan sidoodda in ay dhego xidhan yihiin, ama afrta weriye ee u shaqeeya mareegaha ee Hargaysa jooga in uu xidhi-xidhi karo, waxan leeyahay “Af-dulaaqaw” marna taagtaa marna tamartaa, isku taamo aniga hay tudhin, ee bal waxad hayso gantaal iyo madaafiic igu soo daa. Balan waxan kuugu qaaday in aad raaf-kaad dhaqaaji-saanba, aan ummadda u soo ban-dhigo, oo aad jiif iyo joog-ba diido af daloola lahayde, hunyaw aan karka-raayey.
Waxa la yidhi ” Doqni ilaa la damqo kuma dayso” ee ummaddii soo jeeesatay, dulqaad-kiina wuu ka dhamaaday, ee sii suga inta nabarka la idinku dhufanaayo. Waxan ku soo af meeray qoraalkan. Illaah haw naxariisto’e abawaan Qaasim baa wuxu maanso tiriyey ” Caanuhu dhawaan way ka quban ciil dad loo qabaye”, waxan u soo qaatay, ma dheera goorta la idinka soo qaban doono qoorta, ee la idin odan doono xadhigeedda sii daaya, way idin eedaye, nabsigu waa daruuraha cirka iyo dabayshaas daqiiqad walba is bedelaaya, sidaa awgeed dhiil-kiinii wuu buuxsamay, oo wuxu ka daatay hareeraha, waxa idiin hadhay oo keliya intuu foorar-sanaayey. maanta wax dambe oo aad u sheegaysaan shacabka daacadda ah ma jirto oo way idiin dhamaatay. ma jiro hadal la is yidhaahaa, oo waa taas dabadda jeedisay, yuug iyo yamaayuug ooman, oo wax ay xeerinayaan jirin, wax kala xad mooyaane, in aad tihiin baa laga soo hor iyo dabaka wareegay, cid aad cabdhuin kartaana ma jirto, oo la hubsay oo gorayo haad noqotay, waxan ugu dambayn idinku soo xidhay, inta goori-goor tahay ka maleegta intaan malagiin ku gelin, birtaa idin saran wixii imika ka dambeeya’e.
* N.B Doqni IIaa La Damqo kuma dayso!